Vision 2050 Somali - Orsa kommun
/ Vision 2050 Somali
Vision 2050 Somali
Aragtida Orsa 2050
Magaalada Orsa, waxaan la abuurnaa dadka si wada jir ah, uma abuurno dadka.
Magaalada Orsa, waxaad ahaan kartaa qofka aad tahay oo waxaad noqon kartaa qofka aad rabto inaad noqoto.
Magaalada Orsa, dadka oo dhan waxay leeyihiin meel ay ku koraan. Kobcinta shaqsiyeed iyo aqoonta cusub ayaa meel ku leh bulshadeena, halkaas oo aan si wadajir ah gacan uga geysanno dhisidda waxbarashada. Halkaan waxaan ka qaadannaa waxbarashooyinka adduunka oo dhan oo dugsiga wuxuu ku yaal bartamaha tuulada. Halkan, aragtida carruurta iyo dhallinyarada ayaa ku jirta wax kasta oo aan qabanno.
Magaalada Orsa, waxaan ku abuurnaa goobo kulan oo aan ku horumarino hal -abuurnimada oo aan ku qaadno fikradaha ficil ahaan. Waxaan ka faa'iideysannaa tayada aan leenahay oo waxyaalo cusub ayaan wada barannaa. Halkaan waxaan nahay kuwo xiiso leh, indhaheena ku haya oo ku dhiiran inaan isku dayno siyaabo cusub. Halkan waxaan ku abuurnaa mustaqbalkeena.
Waxaan ka shaqeynaa adduun isbeddel joogto ah. Waxaan sameyneynaa xiriiro waxaanna ku hormarineynaa agagaarkeena, waxaanna qaadannaa aragtida gobolka iyo caalamka. Isku soo dhawaanshaheena iyo hal -abuurnimadeena ayaa naga dhiga mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee iskaashiga ee abuura qiimaha. Halkan, qof walba wuxuu muhiim u yahay shaqada abuurista bulsho waarta oo aan rabno inaan ku noolaano, waayeel iyo dhallinyaro.
Magaalada Orsa waxaa ku yaal bulsho, geesinimo iyo hal -abuur.
Magaalada Orsa waxaa ka jira nolol tayo leh
Inaad ku noolaato Orsa waa inaad noolaato.
Orsa gudaheeda, kaynta mar walba waa la heli karaa waana la arki karaa. Halkaan waxaa ah xarun u gaar ah waayo -aragnimada dibedda, halkaan waxaa ah lamadegaanka iyo aamusnaanta.
Orsa waa meel aan ku faanno. Waan is daryeelnaa, deegaankeenna iyo dabeecadeenna halkaanna qofna uma baahna inuu kaligiis ahaado. Waxaan leenahay nolol dheelitiran waana ammaan inaan halkaan ku noolaano.
Waxaan leenahay hal cag oo taariikhda ku jirta, cagta kalena gudaha mustaqbalka. Halkan waxaa ah dhaqan lagu dhisay dareen iyo ruux gaar ah. Halkaan waxaa ah guryo ka sheekeynaya sheekadeena iyo guriyeyn waarta oo cusub oo ka duwan. Orsa waa barta udub dhexaadka u ah muusigga iyo dhaqanka, halkaan waxaa ah aaminaad mustaqbalka halkaas oo aan ilaalinno oo aan ku abuuri karno wax cusub oo faan iyo farxad leh.
Magaalada Orsa waxaan ku haysannaa waqti iyo tamar aan ku noolaano.
Magaalada Orsa wax baan surta gelinnaa.
Magaalada Orsa dhexdeed waxyaabo fudud ayaad la kulmaysaa.
Magaalada Orsa, waxaa ka jira u dhowaansho dabiici ah iyo wada -hadal joogto ah oo u dhexeeya dadka deggan, booqdayaasha, ururrada iyo ganacsatada. halkan waxaa jira furfurnaan soo dhaweyn leh oo saldhig u ah wax walba oo aan sameyno. Waxaan u wada xiriirnaa dhinac walba waana halkaan wadahadalka ugu wanaagsan ee Iswiidhan.
Gudaha Orsa, waxaan wax u wada qabannaa si fudud. Halkan way fududahay in la abuuro, la kulmo, la curiyo oo la maareeyo. Furfurnaantayada, waxaan nahay dad lagu kalsoonaan karo oo leh jawi uu qof walba ku dadaalayo xalka wanaagsan ee kuwa aan u hayno. Halkan waxaan rabnaa oo waxaan haysannaa waqti dheeri ah.
Annaga iyo kaynteenna, dhulkeenna, tuulooyinkeenna iyo xaruntayadu, waxaan ku casuunnaa fursado cusub. Halkaan waxaa jooga meheradihii iyo qandaraaslayaal oo bixiya adeegyo iyo wax soo saarka deegaan ahaan iyo caalamkaba ah. Halkan, xalalka dhijitaalka ah waxay la kulmaan ganacsi gaar ah iyo adeeg shaqsiyeed, taas oo dad badani u tahay ujeedo lafteeda ah. Halkan gabi ahaanba wey sahlan tahay in la dareemo tayada.
Orsa dhexdeed waan surta gelinnaa.